» धेरै कफी पिउने बानी छ ? सावधान ! गम्भीर असर पर्नसक्छ
४ आश्विन २०७७, आईतवार १२:०१
मकवानपुर ।जाडो महिनामा मात्र होइन गर्मी मौसममा पनि कफी पिउने गरिन्छ ।
अध्ययन अनुसन्धानका अनुसार धेरै कफी पिउदा स्वास्थ्यमा खतरा बढ्दछ । कफीमा हुने कफिनको अत्यधिक सेवनले गर्भपतनको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले गर्भवती महिलाले सकेसम्म बढी कफी सेवन गर्न हुदैन । अन्यथा कम वजनको शिशु जन्मने, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । खबरहब डटकमबाट